ရှမ်းဆိုသည်မှာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Martin Luther King Jr I Have A Dream speech with text
Who was the first anti-racist? »
‎Alexandr Ben‎ to မိုင်းလုံဈေးနေ့💐
ရှမ်းကို ရှေးမြန်မာကျောက်စာများတွင် သျှမ်၊ သျှံ၊ သက္ကတဘာသာအရ သျှာမ (श् याम) ဤဝေါဟာရသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော (အရှမ်း)ခေါ်အဟုမ်၊ ဆိုင်ယမ်း Siam (ရှေးကယိုးဒယားလူမျိုးတို့ကိုခေါ်ဆိုသော) ၊ စိအန် Chi-An ဟူသောဝေါဟာရနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်။ ရှမ်းကို ရှမ်းလူမျိုးများအခေါ် တိုင်း ၊ ယိုးဒယားတွင် ထိုင်း ဟုခေါ်ဆိုသည်။ လွတ်လပ်သော ၊ လွတ်လပ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှေးအကျဆုံးသိရသော အမည်မှာ လ၀် (လောဝ် ၊ Laos ) သို့မဟုတ် (အိုက်လောဝ်) ဟုခေါ်ပြီး ထိုင်းဘာသာစကားတွင် (အိုက်လ၀်) သည် လည်ပတ်သွားလာ သူဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ယခုအချိန်တွင် လာအိုနိုင်ငံ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံတောင်ပိုင်းနှင့် ဗီယက်နာမ်မြောက်ပိုင်းဖက် အနောက်ဖက် ဒေသတို့တွင် လောဝ်ဟုခေါ်တွင်သော ရှမ်းအမျိုးသားများနေထိုင်သည်။ ရှေးတရုတ်မှတ်တမ်းတို့တွင် အိုက်လ၀်ဟု ဖော်ပြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် ရှမ်းလူမျိုးများကို (ပိုင်ယီ) ဟုခေါ်သည်။ အ၀တ်ဖြူဝတ်သူများ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ရှေးတရုတ်တို့သည် မိမိမှလွဲ ၍ကျန်လူမျိုးများကို လူရိုင်းဟုသတ်မှတ်ကာ ထိုလူရိုင်းများတွင် ပိုင်ယီးသည် အယဉ်ကျေးဆုံးဟု သတ်မှတ်သည်။
ရှမ်းလူမျိုးတို့သည် အကြမ်းအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော တိုင်းအဟုမ်၊ ဗြဟ္မပုတြတွင်နေထိုင်သောရှမ်းများကို တိုင်းကတ်စေး (ကသည်းရှမ်း ဟုယူဆရသည်) ၊လာအိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတို့ကို တိုင်းလောဝ်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းတွင်နေထိုင်သောရှမ်းတို့ကို တိုင်းအောင်န်ဘားအီ( အောင်ဘေးရှမ်း) ၊ မလေးပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတို့ကို တိုင်းပါက့် (ပက်ရှမ်း)၊ ယူနန်ပြည်တွင်နေထိုင်သောရှမ်းတို့ကို တိုင်းခယ် ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတို့ကို ထိုင်းနွဲ့ သို့မဟုတ် ယွန်းရှမ်း ၊ မြောက်ဗီယက်နာမ်တွင် ရှဂျင်ရှမ်း၊တိုင်းလမ် (တိုင်းတမ်)၊ တိုင်းခ၀်(ရှမ်းဖြူ) ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ခင်မြစ်ဒေသတွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတို့ကို တိုင်းခင် (ခိုခေ်) ၊ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းတွင်နေထိုင်သောရှမ်းတို့ကို တိုင်းမောဝ် (ရွှေလီကိုရှမ်းဘာသာတွင် နမ့်မောဝ်ဟုခေါ်သည်)၊ ပူတာအိုရှိခန္တီးမြေပြန့်နေရှမ်းတို့ကို တိုင်းခန္တီး ၊ မြောက်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသတွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတို့ကို တိုင်းနေ၊ ကချင်ဒေသရှမ်းတို့ကို တိုင်းလျန် (ရှမ်းနီ) ၊ ရွှေညောင်ဒေသရှမ်းတို့ကို တိုင်းယောမ်ဟွေ့၊ မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်သောရှမ်းအများစု ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ တိုက်ကြီး၊ ရွှေကျင်ကျောက်ကြီး စသဖြင့်သောဒေသမှရှမ်းတို့ ကို တိုင်းတိုက် (ရှမ်းကြီး) စသဖြင့်စသဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် မလိုက်နိုင်အောင် များပြားလွန်းသည်။
ဤသည်မှာ နယ်မြေအလိုက်သာရှိပါသေးသည် ထိုနယ်မြေတွင် ထပ်မံကွဲထွက်သွားသောရှမ်းများစွာရှိပါသေးသည်။။ ဟိုတနေ့က ကျွန်တော်ဖတ်မိသော တရုတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် တရုတ်ပြည်တွင်နေထိုင်သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်ခွဲပေါင်း (၅၆) မျိုး ရှိသည်ဟု ဖော်ပြကတည်းကပင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ရှမ်းလူမျိုးတို့မည်မျှကျန်သေးသနည်းဆိုသည်ကို ပြောပြရန်ခက်နေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုမဆိုထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှမ်းမျိုးနွယ်စု (၃၀) ကျော်ရှိသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိဒေသအတော်များများ၊ မြို့ရွာအတော်များများ၏ အမည်များတွင်လည်း ရှမ်းဘာသာဖြင့် မှည့်ခေါ်ကြသည်။ ဥပမာ ပူတာအို (ပူထောဝ်) ၊ ကသာ (ကတ်ဆာ) ၊ ကလေး (ကတ်လေ့) ၊ ဟူးကောင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ ခေါပုတ်၊ ရှမ်းသိုင်း၊ စောဟူသောရှေးမြန်မာအမည်၊ စသဖြင့် မရေတွက်နိုင် များပြားလှသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးတွင် ရှမ်းအမည်နှင့် အဘယ်ကြောင့် ပြန့်ကျဲနေရသနည်း။
အဖြေကရှင်းပါသည်။ ယခင်က တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိခဲ့ခြင်း အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် ၊ မည်သည့်ဘာသာစကား၊ မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မည်သို့ ရပ်တည်ခဲ့သနည်းဆိုသည်ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်…….
This entry was posted on July 9, 2019 at 8:55 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.